Shirkii Hogaamiyaasha Maamulada Gobolada Soomaaliya oo Kismaayo Ka furmay -
Shirka Wadatashiga ee u dhaxeeya Maamul goboleedyada ayaa Xalay ka furmay guriga Martida ee Magaalada Kismaayo, iyadoo Madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay furitaanka shirka ka jeediyeen khudbado Shirka ku saabsan.
Axmed Madoobe oo shirka furay ayaa sheegay in shirka uusan aheyn mid ay isugu baheysanayaan dowladda Federaalka, isla markaana ujeedku yahay sidii wixii mugdi ah oo jira loo dhamayn lahaa, kadibna talo loo dhanyahay Dowlada dhexe loola tagi lahaaa.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in Madaxda maamul goboleedyada iyo dowlad goboleedyada looga baahan yahay inay u hoggaansamaan Dastuurka oo uu xusay inuu yahay kan xalka lagu gaarayo.
C/wali Gaas ayaa sheegay in shirkan muhiimadiisu tahay in la sameeyo siyaasad ay ku mideysan yihiin madaxda dowlad goboleedyada, waxaana uu tilmaamay in ujeedku ay aanu aheyn inay abuuraan dhibaato iyo kala dambeyn la’aan, balse ay ku xoojinayaan dowlad wanaaga Soomaaliya.
Shirka oo caawa la soo gaba gabeeyay wajigiisa koowaad, waxaa la filayaa in maalinta berri la soo gaba gabeeyo, lagana soo saaro war murtiyeed.
Related Items:Featured, Shirkii Hogaamiyaasha Maamulada Gobolada Soomaaliya oo Kismaayo Ka furmay
Xukuumadda Soomaliya Arin ku saabsan